Home Flashsong flash song(1)
Flash songs(2) Flash songs(3) Flash songs(4) Flash songs(5) Flash songs(6) flashsongs(7) Flash songs(8) Download
Avast Anti Virus Pro Final Full License Avira free antivorus
Kaspersky Security 2013+Full #
Flash Player Microsoft office 2010 full
Windows7Full Version #
Angry Birds for Windows IObitSystemCare Portable_5.2
Photoshop 7.0 Photoshop cs3 portable Photoshop cs6
portable Speed up your PC System Speedup Portable About Me Education
Fun Easy English TalkEnglish
Bussu EngVid Learn English
Prefect English Grammar
Adobe photoshop7.0 Adobe PhotoshopCS4
နည်းပညာ Ebooks စုံဆိုဒ်
ဒါက Adobe After Effect CS4 ပါ၊ ဘာတွေလုပ်ဆောင်နိုင်လဲဆိုရင် ကိုယ်စွမ်းဥာဏ်စွမ်းရှိရင် ရှိသလို ဒီဇိုင်းတွေ ဖန်တည်းယူလို့ရပါတယ်။ ဥပမာ ကျွှန်တော်တို့ Hancock တို့ Thor တို့ Superman စတဲ့နိုင်ငံခြားအက်ရှင်ရုပ်ရှင်တွေထဲကလို ကောင်းကင်မှာပျံသလို၊ မြေကြီးတွေကို Crack ဖြစ်သွားအောင်ခုန်သလို၊ ကိုယ့်ဆီကနေ လျှပ်စစ်လိုင်းတွေ မီးတွေ စတဲ့ ပါဝါတွေ စွမ်းအားတွေထုပ်ပီး ပြစ်ပေါက်မီးရှိူ့သလို အံ့မခမ်း ဖန်းတည်းယူလို့ရမှာပါ။ အောက်မှာ ကျွှန်တော့်ဘော်ဒါကို ဖုန်းနဲ့ Video ရိုက်ပီး နမူနာလေးလဲလုပ်ပြထားတယ်နော၊ တခြား Photoshop ဆိုင်ရာတွေလဲလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသေးတယ်၊ စိတ်ဝင်စားရင် ကိုယ်တိုင်ကလိကြည့်ပါ၊ ၀ါသနာပါလို့ ကလိကြည့်မယ်ဆိုရင် YouTube မှာလဲ Tutorials Video တွေအများကြီးရှိသလို နားမလည်တာ မရှင်းတာရှိခဲ့ရင်လဲ Comment လေးထားပီးမေးနိုင်ပါကြောင်း၊Software ကအောက်မှာ ဒေါင်းပါ၊ Version အသစ်တွေလဲရှိပါတယ်၊ လိုချင်ရင်တော့ဝယ်ရပါလိမ့်မယ် ကျွှန်တော်ကတော့အလကားပေးပါမည်၊ 32bit & 64bit နှစ်မျိုးစလုံးအကျုံးဝင်ပါတယ်၊ အထဲမှာ Installation လုပ်ပုံကိုလဲပြောပြထားပါတယ်၊ နောက်တခါကြရင်တော့ Effect တွေရော လုပ်နည်းလေးကိုပါ Video ဖိုင်လေးလုပ်ပီးတင်ပေးပမယ်၊
Adobe After Effect CS4 ဒေါင်းရန်
WinRAR v5.01 (64bit & 32bit) full Version
ဖိုင်တွေ Zip ဖိုင်တွေ ကို Extract လုပ်ပေးမဲ့ နောက်ဆုံးထွက် ဆောဝဲလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Winrar v5.01 နောက်ဆုံးထွက် ပါ။ Activated လုပ်ပြီးသားမို့ ကီးထည့်ရန် မလိုပါ။ ဆောဝဲကို install လုပ်ပြီးတာနဲ့ full သုံးလို့ ရပါပြီ။ Read more »
ဖုန်း Andriod Version 4.2.2 နဲ့ အထက် Galaxy S3, S4 အပါဝင် Root ဖောက်စရာ မလိုပဲ မြန်မာဖောင့် သွင်းနည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနောက်ပိုင်း Sumsang ဖုန်းတွေက Andriod Version 4.2.2 နဲ့ အဲ အထက်တွေပဲ ထွက်လာပါတယ်။ ကျနော် တို့ သာမန် zawgyi one.apk နဲ့ Install လို့ Support မလုပ်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဖုန်းကို Root ပြီး ထည့်ရတာများပါတယ်။ အခုတင်ပေးတဲ့
နည်းလေးက ဖုန်းကို Root စရာမလိုပဲ Setting> My device > display>
font style မှာပဲ မြန်မာဖောင့် ပြောင်းတဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ လူတော်တော်များလည်း သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ မသိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး အောက်မှာ ကျနော်ပေးထားတဲ့ Zawgyi-One Naw Flipfont ကို အရင် Install လုပ်ရပါမယ်။
Download S4 Zawgyi-One Naw Flipfont Google Drive, Zippyshare
S4 Zawgyi-One Naw Flipfont ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Setting> My device > display> font style ကိုသွားပြီး မိမိ နှစ်သက်ရာ Font Style
မှ တခုခုကို Select ပေးလိုက်ရင် မြန်မာလို ကောင်းကောင်းမြင် ရပါပြီ။ အောက်ကပုံမှာ ကြည့်လိုက်ပါ။ Android
Version 4.2.2 အထက်ဖုန်းတွေ အားလုံးနည်းပါး ဒီအဆင့်နဲ့ ပဲ အဆင်ပြေတာ များပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ Zawgyi Keybroad ကိုတော့ ဒီအောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ။
ပြီးရင် Setting–>>My device >> Language and input >>Frozen keyboard Pro ကိုအမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပြီး Default keyboard >>Frozen Keyboard Pro ကိုရွေးပေးထားပါ။ ဒီလောက်ဆိုရင်
အားလုံးအဆင်ပြေနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ Sumsang Galaxy Ace
3 တို့ Galaxy S3, S4 တွေမှာ အားလုံးအဆင်ပြေပါမယ်။ Frozen Keybroad Pro အဆင်မပြေတဲ့ သူငယ်ချင်းများက နောက်ထပ် မြန်မာ ကီးဘုတ်တခုကို ဒီလင့်မှာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ။
Kaspersky Internet Security 2014 [ 1 Year License ] Patch + Full Offline Updates
⇨ More than 1 year Validity. ⇨ 1st one net only by me. ⇨ Works with both KIS 13 & 14 Edition. ⇨ Two bug fixed in this release to decrease human effort. ✪ Kaspersky Internet Security 2014 Full Offline Updates [Security Patch (e) Included] ✪ ⇨ Error free full offline update for Kaspersky Internet Security 2014 ⇨ Latest security patch (e) included. NOTE: If you're going to update your KIS 14 for 1st time then you'll need to update your product at least 20kb via direct online if you face any problem with this.
Download Latest Build of Kaspersky Internet Security 2014 here:- http://goo.gl/hj1rLN
Download Latest Build of Kaspersky Internet Security 2013 here:- http://goo.gl/3QFjjC
_1_Year_License Key Patch here
Acoustica CD/DVD Label Maker 3.33 Free full version
Acoustica CD/DVD Tag Maker isatool for creating cover art and tags for CDs and DVDs. With the tags you create with this application, you don’t have to guess what’s on the disc and you can also give itaspecial look.
You can tag DVDs for special occasions like Christmas, St. Valentine’s Day, birthdays, holidays, weddings and more.
Acoustica CD/DVD Tag Maker automatically imports track information from Acoustica MP3 CD Burner, iTunes, WinAmp, Easy CD Creator or any other playlist.
Acoustica CD/DVD Tag Maker’s outstanding features include:
- LightScribe technology support; - Supports partial transparency for images and texts;
- Printer alignment wiza
- Reads backup CDs and creates an instant summary;
- Supports JPEG, PNG, GIF, TIF, RAW formats and much more. Read more »
AVG AntiVirus PRO 2013 for Android - 1 year license
Get AVG AntiVirus PRO 2013 for Android 1 year license for free.
Safety - Surf and download from the Internet on your smartphone with peace of mind.
Safe Web Surfing - Protection against website scams and malware.
Anti-theft - Helps you remotely locate your smartphone and remotely lock or wipe personal data if needed.
SMS Scanner - Keep your phone protected from hackers and scammers by securing your inbox with SMS Scanner.
Tune-up - Monitor your data plan usage, as well as battery and app storage consumption, to help optimize the performance of your device resources.
Task Killer - Manage the memory on your smartphone to optimize your device.
Privacy - Lock and protect your individual apps from others.
Support - Our expert help is available for free to all our PRO users.
AVG AntiVirus PRO Product Page
AVG AntiVirus for Android is supported in the following languages: English, German, Spanish, French, Japanese, Korean, Chinese, Portuguese,
Russian, Arabic, Italian, Polish, Dutch, Hebrew, and Czech.
P.S. Please note that this isadirect .apk download. The license is pre-activated.
Regcure Pro3.1.3.0 full Crack
ဒီကောင်လေးကတော့ မိမိတို့ရဲ့ Computer မှာ မကြာခဏ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ system problems တွေ registry errors, malware,adware, privacy files, နဲ့ junk files စတဲ့ မိမိတို့စက်ကို လေးစေတဲ့ အရာတွေကို ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးပီး သွက်လက်မြန်ဆန်စေအောင် လုပ်ဆောင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရမ်း ကောင်းတဲ့ Software လေးဖြစ်တဲ့ အတွက် စက်ထဲမှာ ဆောင်ထားသင့်ပါကြောင်း၊ Full Version ဖြစ်ဖို့ Crack ဖိုင်နဲ့ပြုလုပ်ပုံလေးပါ ပြထားပါတယ်။
►►►═══════════════════๑۩۞۩๑═════════════­════◄◄◄█║▌││║▌ ║││█║▌ │║║█║
►►►═══════════════════๑۩۞۩๑═════════════­════◄◄◄█║▌││║▌ ║││█║▌ │║║█║ How to create full version
ကျွှန်တော်လဲ မအားတာနဲ့ ဒီဆိုဒ်လေးကို ပြန်မကြည့်ဖြစ်တာကြာပါပီ၊ ရောက်လာနေကျ သယ်ရင်းအားလုံးကို တောင်းပန်ပါတယ်။ လိုအပ်တာ လိုချင်တာ ရှိရင် Contact မှာသွားပီး စာချန်ခဲ့ပါ၊ ကျွှန်တော် အတတ်နိုင်ဆုံး တင်ပေးပါမယ်။
Myanmar Fonts နဲ့ English Fonts အလှများ
ကိုယ်ပိုင် Blog လုပ်ချင်သုများအတွက် Blog လုပ်နည်း
PC Cleaner Pro 2014 Full Version How to download absolutely free movies
Hentia Student Japan Sexy Game full +18
sothink swf easy portable v6.1.
Flash song ဆိုင်ရာ
Create Flash songs
SWiSH Max4Protable
Create play & stop
Mouse effect ebook
Play & Stop buttons Flash songထဲမှာ လင့်ထည့်နည်း SWiSH Max2Protable
SWiSH3exe
Mp3 ချုံ့နည်း၊ ဖြတ်နည်း
swf to video portable
Flash song ထဲက ပုံကိုဘယ်ညာပြောင်းနည်း
VLC Player Window Media GOM Player
Winamp Player WinRAR For 32bit
WinRAR For 64bit
Created by ခေတ်သစ်မောင်